Impembelelo yokusebenza komgangatho oshushu womngundo ekusebenzeni kwawo-iAojie Mold Co., Ltd.
Impembelelo yomgangatho oshushu osebenzayo womngundo ekusebenzeni kwawo
Umgangatho oshushu osebenzayo wokubumba unefuthe elikhulu kwintsebenzo nakwinkonzo yenkonzo yokubumba. Kubomi bokwenyani kunye nomsebenzi, iworkshop yethu yokubumba ifuna ukuphuculwa okungapheliyo kuyilo kunye nokuveliswa komngundo ohlukeneyo, kwaye kuya kubakho iingxaki ekusebenzeni okuthile. Siza kuxoxa kwaye sitshintshe iingxaki ekusebenziseni izitampu zokubumba kunye nabavelisi be-Shenzhen
Ukucinywa kokucinywa kunye nokuqhekeka kweendawo zokusebenza zomngundo kunye nokwaphuka kwangoko kwinkqubo yokusetyenziswa konke kunxulumene nenkqubo yokusebenza eshushu yokubumba.
(1) nasekuqiniseni inkqubo, nto leyo ikhonkco ebalulekileyo kwinkqubo yokuvelisa amalungu kufa iindawo zokusebenza. Ukubumba kwesinyithi se-alloy yesinyithi, iimfuno zobugcisa zesakhiwo se-metallographic ezifana nokusabalalisa i-carbide zihlala zibekwa phambili. Ukongeza, uluhlu lobushushu nasekuqiniseni kufuneka lulawulwe ngokungqongqo, imigaqo yokufudumeza echanekileyo kufuneka iqulunqwe, indlela echanekileyo yokwenza amandla kufuneka yamkelwe, kwaye ukupholisa okucothayo okanye ukuthanjiswa kwangexesha emva kokwenziwa kufuneka kwamkelwe.
(2) Lungiselela unyango lobushushu. Ngokwezixhobo ezahlukeneyo kunye neemfuno zamalungu asebenza ngokufa, iinkqubo zangaphambili zokunyanga ubushushu ezinje ngokufakwa isihlunu, ukubuyisela kwimeko yesiqhelo okanye ukucima kunye nokucaphuka kufuneka kwamkelwe ukuphucula ubume bezinto ezincinci, ukuphelisa iziphene zokwenza izinto ezincinci kunye nokwenza ngcono itekhnoloji yokuqhubekeka. Emva konyango olulungileyo lokunyanga ubushushu, i-cementite yenethiwekhi yesibini okanye i-carbide yecangca inokupheliswa, i-carbide inokuthi iqhutywe kwaye icokiswe, kwaye ukuhanjiswa kwe-carbide kunokukhuthazwa. Ngale ndlela, ukucima kunye nomgangatho wobushushu unokuqinisekiswa kwaye ubomi benkonzo yokusweleka bunokuphuculwa.
(3) Ukucima kunye nokubila. Eli likhonkco eliphambili kunyango lobushushu lwesikhunta. Ukuba ubushushu buyenzeka ngexesha lokucima kunye nokufudumeza, into yokusebenza ayizukubangela nje ukukrala okukhulu, kodwa iya kubangela ukuba deformation kunye nokuqhekeka ngokulula ngexesha lokupholisa, okuya kuchaphazela kakhulu ubomi benkonzo yokusweleka. Ngexesha lokucima kunye nokufudumeza ukufa, kufuneka kuhlawulwe ngakumbi ukukhusela i-oxidation kunye ne-decarburization. Inkqubo yenkqubo yobushushu kufuneka ilawulwe ngokungqongqo. Ukuba iimeko zivuma, kungasetyenziselwa unyango lobushushu. Emva kokucima, kufanele ukuba ibe shushu ngexesha, kwaye iinkqubo ezahlukeneyo zokubekwa kufanele zamkelwe ngokweemfuno zobugcisa.
(4) Ukuphelisa uxinzelelo. Amalungu asebenza ngokufa kufuneka anyangwe ngokunyanzelwa koxinzelelo emva koomatshini abarhabaxa ukuze kupheliswe uxinzelelo lwangaphakathi olubangelwa kukumanzana, ukwenzela ukuthintela ukugqabhuka okugqithileyo kunye neentanda ezibangelwa kukucima. Ukubumba ngokuchaneka okuphezulu, unyango lokunciphisa uxinzelelo luyafuneka emva kokuba usile okanye umbane wombane, olungele ukuzinzisa ukungunda kunye nokuphucula ubomi benkonzo.